Valverde oo ka digay halista kaga imaan karta kooxda Eibar ka hor kulanka barri ee La Liga – Gool FM
(Barcelona) 18 Oct 2019. Kooxda Barcelona ayaa barri oo Sabti ah waxay marti ugu noqon doonta naadiga Eibar garoonka Ipurua Municipal, si ay u wada ciyaaraan kulankooda 9-aad ee horyaalka La Liga dalka Spain xilli ciyaareedkan.
Barcelona ayaa ku jirta kaalinta labaad ee miiska kala sareynta horyaalka La Liga iyagoo leh 16 dhibcood, kaliya 2 dhibcood ayeey ka hooseeyaan hogaamiyaasha horyaalka ee Real Madrid, halka Eibar ay ku jirto kaalinta 14-aad iyaga oo leh 9 dhibcood.
Haddaba Ernesto Valverde ayaa ka digay qatarta kaga imaan karta Barcelona kulanka soo aadan ay la ciyaarayaan Eibar, isaga oo carabka ku adkeeyay in kooxda ka soo horjeedda ay nolosha ku adkeyn karto naadi kasta ay la ciyaarayaan.
Macalinka reer Spain ee Ernesto Valverde oo ka soo muuqday shir Jaraa’id kahor kulanka barri ee Eibar ayaa wuxuu yiri:
“Eibar waxay nolosha ku adkeyn kartaa koox kasta”.
“Waa koox si fiican u taqaana sida cadaadis loo saaro kooxda ka soo horjeedda, waxayna u sameynayaan wax walba ay awoodaan si ay kaaga hor istaagaan inaad dhaafto khadka dhexe, xaqiiqdii wuxuu noqon doonaa kulan aad u adag”.
Intaas kaddib Ernesto Valverde ayaa wuxuu ka hadlay howlgalka kooxda Barcelona ilaa iyo haatan horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan wuxuuna yiri:
”Waqti adag ayaan soo marnay, waxa aan jeclahay ayaa ah inaan awoodno inaan soo laabano, taasina waa waxa ugu muhiimsan”.